BARANI: ခရီးသွားခဲ့ သည်။
လွန်ခဲ့ နဲ့ နှစ်ပတ်လောက်ကစကော်တလန် သို့ ရောက်ခဲ့ တယ်။စကော်တလန်တနယ်လုံးတော့ မရောက်ခဲ့ 
ပါဘူး။Edinburgh နဲ့ Glascow နှစ်မြို့ ထဲဘဲရောက်ခဲ့ တယ်။သွားတာကလည်း၂ ညအိပ်သုံးရက်ခရီးဘဲဆိုတော့ ။အယ်ဒင်ဘရာ ကစကော်တလန်မှာရှိတဲ့ မြို့ တွေထဲ ကမှဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးယူကေရဲ့ ခုနှစ်ခုမြောက်အထင်ရှားဆုံးလည်းဖြစ်တယ်။၂၀၁၀ နှစ်လယ်ပိုင်းမှာကောက်ယူခဲ့ တဲ့ ကိန်းဂဏန်း
အရ လူဦးရေ ၄၈၆၁၂၀ နေထိုင်ပါတယ် ။အယ်ဒင်ဘရာမြို့ မှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ အယ်ဒင်ဘရာပွဲတော်ကတော့
အင်မတန်ကျော်ကြားပါတယ်။ပွဲတော်တွေကိုသြဂုတ်လ အစပိုင်းမှလေးပတ်ကြာအောင် ကျင်းပ လေ့ ရှိတယ်။ပွဲတော်တွေထဲမှာမှ Edinburgh Fringe ၊Edinburgh International festival၊ Edinburgh International Book Festival ရယ် Military tattoo ကတော့ နံမယ်အကြီးဆုံးပွဲတော် တွေပါ။ဘရဏီတို့ 
သွားတော့ Edinburgh International Book Festivalကိုနောက်ဆုံးရက် မှီတယ် ။ပြီးတော့ Edinburgh International festivalကိုတော့ ကောင်းကောင်းမှီလိုက်တယ်။အယ်ဒင်ဘ၇ာကို နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်သည် တနှစ်ကိုတသန်းကျော်လာပြီး ယူကေမှာလန်ဒန်ပြီးရင်
အသွားတုန်းကလမ်းမှာရထားပေါ်ကနေလှမ်းရိုက်ခဲ့ တဲ့ ဂျုံခင်းလေး။
ခလုပ်လေးကိုနှိပ်လိုက်သောအချိန်မှာဖြင့်.........။ဟင်သွားပြီ အားသွင်းထားတဲ့ဘက်ထရီ မေ့ခဲ့ ပြီ။
ကင်မရာကအခွံကြီးဘဲပါလာတာ ဘက်ထရီက အိမ်မှာကျန်ခဲ့ ပြီ။ဓါတ်ပုံ တွေအားလုံးကို ဖုန်းကနေဘဲရိုက်ခဲ့
ရတယ်။ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောရမလားဘဲ စကော်တလန်ကအရမ်းမိုးရွာတယ် ၁လမှာရက်၂၀လောက်က
မိုးရွာနေတယ်။ဒါပေမယ့် ဘရဏီတို့ နေခဲ့ တဲ့ ၃ ရက်လုံး လုံးဝမိုးမရွာဘူး။အပူချိန်ကလည်း ၁၅ ဒီ၈ရီ
ဆဲလ်စီးရက်စ် လောက်ဆိုတော့ အရမ်းမအေးဘူး။
ူဒါကတော့ ဘူတာကထွက်ထွက်ချင်းမြင်ရတဲ့The Scott Monument အထဲမှာလှေကားလေးတွေရှိတယ်အပေါ် ထိတက်လို့ ရတယ်။အလယ်မှာလူကြီးတယောက်ထိုင်နေတယ်။
အပေါ်ကပုံကတော့ နံမယ်ကျော် Edinburgh Castle ။စကော့ တလန်တနယ်လုံးမှာ ခရီးသွားတွေကိုအဆွဲဆောင်နိူင်ဆုံးနံပတ်တစ်။၀င်ကြေး ၁၅ ပေါင်ပေးရတယ် ။သူကလွဲရင်တခြား ပြတိုက်တွေကအလကားဝင်ရတာများတယ်။ဘီစီ ၈၅၀ ကတည်းကရှိခဲ့ တာ။ပြီးတော့မီးတောင်ကျောက်တုံးတွေပေါ်မှာဆောက်ထားတာ။အထဲမှာကြည့် စရာတွေ
တော်တော်များတယ် Castle ကတနေရာမှစစ်ဖြစ်တုန်းကလူတွေပုန်းရင်းနဲ့သေထားတဲ
Castle ပေါ်ကနေမြို့ ကိုရိုက်ထားတဲ့ ပုံ
့အခန်းလေးရှိတယ်။အဲ့ အခန်းထဲကိုကြောက်ကြောက်နဲ့ သွားကြည့် ခဲ့ သေးတယ်။သူတို့ ဘုရင်မကြီးရဲ့ သရဖူ အစစ်သွားကြည့် ခဲ့ သေးတယ်။ဓါတ်ပုံတော့ ရိုက်ခွင့် မပြုဘူး။
Castle ကိုအောက်ကနေပြီးမြင်ရတဲ့ အနေအထား
Philosopher David Hume ( အိမ်ကလူကြီးကသူ့ ခရေစီ )
St Giles's Catherdalရှေ့ကAdam Smithသူ့ တို့ ကြောင့် တို့ တွေရန်ဖြစ်ခဲ့ ရသေးတယ်နောက်နေ့ ကြမှပြောပြမယ်။
ညနေကြတော့ တောင်တက်ပါတော့ မယ်။တောင်ပေါ် ကြရင်အေးမှာဆိုပြီး ဟိုတယ်တခေါက်ပြန်နွေးနွေး
ထွေးထွေးဖြစ်မဲ့ အင်္ကျီတွေ ဘာတွေလဲပြီးစတက်ပါတော့ သည် ။တောင်နံမယ်က King arthur's Seat
ကင်းဝန်မင်းကြီးလာတုန်းကဒီတောင်ကိုတက်ခဲ့ တယ်ဆိုဘဲ ။တောင်ကမီးတောင်ဟောင်းကြီး မြေပြင်ကနေ
၈၂၃ပေမြင့် တယ် ။mountain ခေါ် ရလောက်အောင်မမြင့် ဘာဘူး hill အဆင့် လောက်ဘဲရှိတယ်ထင်တာဘဲ ။ကိုယ်ကလည်းတောင်ဆိုလို့ ဘယ်တောင်မှတက်ဘူးတာ မဟုတ်ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ကိုတောင် ကားနဲ့ 
ဘဲတက်ဘူးတာ ။ကိုယ့် ခြေထောက်တဲ့ ကိုတက်မှာက ဒီတောင်ပထမဆုံးဘဲဆိုတော့ တောင်ခြေမှာထဲ က
အူမြူးနေတာ ပါးစပ်တောင်ပိတ်လို့ ရဘူးပျော်လွန်းလို့ ။
အနားကိုမလာပါနဲ့ တဲ့ ကျောက်တုံးတွေပြုတ်ကြလာနိုင်ပါတယ်တဲ့ 
ရောက်တော့ မယ်ကွ ဒါပေမယ့်အူမမြူးနိုင်တော့ ဘူးမောလွန်းလို့ 
အပေါ်ကမြင်ရတဲ့ တောင်လေးပေါ် လဲရောက်ရောအခုပုံထဲကတောင်သေးသေးကိုတွေ့ ရော ကင်းဝန်မင်းကြီးကတော့ ဘယ်အထိတက်ခဲ့ လဲမသိဘူးဘရဏီကတော့ ထိပ်ထိရောက်အောင်တက်ခဲ့ တယ်။
နောက်ဆုံးခဏနားခဲ့ တဲ့ နေရာ
နောက်နေ့ ကြမှ Glascow သွားတဲ့ အကြောင်းဆက်ပြောပြမယ်။
Posted by ဘရဏီ at Thursday, October 06, 2011
အင်း ကောင်းတယ်နော် ခရီးသွားရတာ။
ကျောင်းပိတ်ထားပြီးလား။ မဖတ်ရသေးတဲ့ သုံးပုဒ်လုံး ဖတ်သွားတယ်။
21 October 2011 at 04:59
သွားတာဒီGlascow မြို့ ကနေ၂နာရီထပ်ကားမောင်းရသေးတယ်တဲ့။
29 December 2011 at 15:13
Political Science Intro
All Cooking Sites - Top Sites - Recipes , Chefs, Drinks, Desserts, Restaurants
May Barani Naing
30 mins meal (5)
CASINO KING | 21Nova Casino Review | Counter code | Bwin casino | LADBROKES CASINO
မနေ့ ကအပိုင်း (၁) ပြီးသွားပေမယ့်  ဓါတ်ပုံတွေ ကအများကြီး ကျန်သေးလို့  ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အိမ်မှာ ကိုယ့် ဖာသာကိုချက်စားတာတွေရော ၊ အပြင်မှ...
ချောကလက် ရေခဲမုန့် 
ဒီလအတွင်းရာသီဥတု ကနည်းနည်း ပူလာပြီ။ ဦးထုတ် တွေ လက်အိတ်တွေ မာဖလာတွေ တော့ ချွတ်လို့ ရသွားပြီ။အနွေးထည် တော့ ချွတ်လို့ မရေ...
စတော်ဘယ်ရီလာပြန်ပြီ။အရင်တပတ်ကဘဲ စတော်ဘယ်ရီ cheese cake ။အခုစတော်ဘယ်ရီ ဂျယ်လီ၊ ပူတင်း၊ ရေခဲမုန့် ၊ကျောက်ကျော။ အဲ့ ဒီလိုခေါ် ရတဲ့  အကြေ...
နှစ်ပေါင်း ၃၅၀ မှာ မှ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ကျင်းပတဲ့  နန်းသက် ၆၀ ပြည့် နှစ် ဆိုတော့ လဲ ကြီး ကြီး ကျယ် ကျယ်ကျင်းပကြပါတယ်။ စောစောတော့  သွား...
သရက်သီးရေခဲမုန့် (Mango Ice-cream)
နွေရာသီဘဲရောက်ပီဆိုတော့  သရက်သီး ရေခဲမုန့် လေးစားကြတာပေါ့ ။ အလုပ်တွေ များတွေလို့  ကိုယ် ဘလော့ ကိုယ် တောင်ပြန်မလည်နိူင်တာ တောင် ၁ပတ...
မအားလို့့ ဘလော့ကို update မလုပ်နိုင်တာတောင်ကြာသွားပြီ။ဒီအာလူးသုတ်နည်းက ဘရဏီ အမေ သုတ်ကျွေးနေကြ အာလူးသုတ်နည်း။ ပင်စိမ်း ရွက်၊ မဆာလာန...
၀က်သားကြံမဆိုင်ဟင်းကချက်ရတာအလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ဟင်ချက်ချိန်လည်း မိနစ်၂၀-၃၀အတွင်းဘဲ ကြာတယ်။ဟင်းတွေချက်သလိုဆီသက်ချက်စရာလည်းမလိုပါဘူး။သူမျာတေ...
့ ဒီတခါတော့ဘလော့ပေါ်ကမမနဲ့ ညီမလေးတွေအတွက်ကိုယ်မီးဖိုချောင်ထဲကပစ္စည်း လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီး ပေါင်းတင်လို့ ရတဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်နည်းေ...
စတော်ဘယ်ရီ cheesecake က အချိုပွဲ အနေ နဲ့ စားသုံးရတာပါ။အရသာကောင်းမွန်ပြီး အချိန်ကုန်လဲ သက်သာပါတယ်။အိမ်ကိုဧည့် သည် တွေလာလို့ လုပ်ကျွေ...
ပြောင်းဖူး seafood ဟင်းချို
ပြောင်းဖူး နဲ့  seafood stick ဟင်းချိုလေးက ချက်ရတာအင်မတန် လွယ်ကူပါတယ်။တရုတ် အစားအစာတွေထဲမှာလဲ နံမယ်ကြီးတဲ့  ဟင်းချိုလေးပါ။ တရုတ်စ...
Barani. Simple theme. Powered by Blogger.